Ngaba idashlane yintsholongwane? - Faq
Eyona > Faq > UDashlane uzifakile-indlela yokuthatha isigqibo
UDashlane uzifakile-indlela yokuthatha isigqibo
Ngaba idashlane yintsholongwane?
UDashlaneIsoftware-encryption yasimahla enokuthi maxa wambi ibonakaliswe sisicelo sakho sokhuseleko. ... Ukuba uyifakile le nkqubo ngokwakho, awufanelanga ukuba nexhala njengoko isicelo sinokukunceda ukhusele ubumfihlo bakho kunye nokhuseleko ngolwazi lwakho lokungena kwi-Intanethi, okt.UDashlaneayisiyiintsholongwane.Ngomhla wama-22 kuJuni
Esi siqendu siziswe nguDashlane; Ungaze ulibale enye ipassword kwaye ugcine iziqinisekiso zabalingane bakho zikhuselekile ngokusayina iakhawunti yasimahla namhlanje! Ngenye imini ekuqaleni kuka-2007, injineli yenyukliya yaseIran yafaka ilaptop yayo kuthungelwano olukhuselekileyo lwekhompyuter kwindawo enobutyebi yaseNatanz, okanye yabalumkisa kwiikhompyuter, ejonge ukusebenza kwabo, amakhulukhulu e-uranium enrichment centrifuges aqala ukuphuma ngaphandle kolawulo, ebangela ubukhulu intshabalalo njengoko bazikrazula babe ziingceba ngelixa iinjineli ezigqwesileyo zase-Iran kunye neengqondo zesayensi zazididekile ukuba kutheni. Namhlanje siza kufunda ukuba kutheni kwaye kutheni kwesi siqendu se-Infographics Show: Stuxnet, intsholongwane eyakhubaza inkqubo yenyukliya yase-Iran. Ukuqonda iStuxnet, kufuneka siqale siqonde imvelaphi yenkqubo yenyukliya yaseIran kunye nefuthe lommandla.
Kwiminyaka ye-1950, phantsi kwenkqubo yeAtoms yoXolo, i-US ibonelele i-Iran-eyayingumlingani wengingqi ngelo xesha-ngoqeqesho lobuchwephesha kunye ne-reactor encinci yenyukliya ngenjongo yokumisela inkqubo yamandla enyukliya. Olo ncedo lwaqhubeka de kwafika uQhushululu lwaseIran ngo-1979, xa, ngokuphela koncedo lwaseMelika kunye nokufuduka kwabona bantu babalaseleyo kwezesayensi nezobuchwephesha eIran, kudityaniswa nenkcaso ka-Ayatollah Khameini kumandla enyukliya, i-Iran yamisa inkqubo yamandla enyukliya. Kwiminyaka nje emihlanu emva koko, ngo-1984, u-Ayatollah Khameini wazikisa ukucinga malunga namandla akhe enyukliya kwaye wagqiba kwelokuba ebusweni be-Iraq enobutshaba kunye nelizwe elinikezela kakuhle lakwa-Israyeli, ukhuseleko lwase-Irani kufuneka luxhomekeke ekuphuhliseni izixhobo zalo.
Ngaphantsi kwesitayile sokuvuselela inkqubo yamandla oluntu, i-Iran yaqala ukucela uqeqesho lobunjineli kunye nezinto ezivela eRussia, China nase Pakistan kwiminyaka elishumi eyadlulayo, zafikelela ekufumaneni izibonelelo eziyimfihlo zokuphucula iuranium eNatanz nakwezinye iindawo, kwaye ziceba ukuphuma Imijukujelwa yebhola kunye nemfazwe yenyukliya. Nge-Israel ityhalela ungenelelo oluxhobileyo kwaye i-US inyanzela ngakumbi nangakumbi ukuxhasa isisombululo somkhosi, i-Iran yanyanzelwa ngoJulayi 2015 ukuba yamkele isicwangciso esidibeneyo sokusebenza, esibonelela ngendlela yokwandisa isohlwayo ukubuyisela ukungafihli ngokupheleleyo kunye ukudiliza inkqubo yenyukliya. Ukusukela oko kwaqala amabhongo enyukliya eIran ngoo-1980, u-Israyeli uvakalise inkxalabo kwangoko malunga ne-Iran elungele inyukliya.
I-US yabelana ngezi zinto zixhalabisayo, kodwa yajonga naluphi na ungenelelo lomkhosi oluthe ngqo njengolunokubangela uzinzo kwaye yoyike imfazwe yengingqi kunye nabamelwane abanobutshaba kunye nezixhobo zenyukliya kuphela kumakhulu eekhilomitha ukusuka kwimida yayo, uSirayeli owayekhathazekile wathatha imicimbi ezandleni zakhe kwaye waqala imfihlo ebanzi Iphulo lokulwa nenkqubo yenyukliya yaseIran. Izixhobo zenyukliya zaseIran ziye zatshatyalaliswa okanye zatshatyalaliswa, kwaye izazinzulu kunye neenjineli zabo baye banyoba ukuze bakhusele. okanye, ukuba akunjalo, bebejolise kwilinge lokubulala.
Nangona usafuna isisombululo sezozakuzo, i-US yabona isidingo sokulibazisa inkqubo yenyukliya yase-Iran kwaye yajoyina iphulo lokutshabalalisa u-Israyeli ngokuthintela unikezelo lwamandla kunye neempompo zokucoca ulwelo uzithumele kumaziko e-US apho zenze khona iimpazamo ezincinci kodwa ezibulalayo Emva kokuphinda-phinda iinjongo zakhe zenyukliya. , uMongameli uGeorge W.
UBush uxelele amagosa aphezulu ngo-2006 ukuba ukhetho alwenzayo e-Iran lwalunambini: yiya emfazweni umise inkqubo yenyukliya okanye uyivumele ukuba igqitywe. Emva koko wanika uMcebisi woKhuseleko kuZwelonke uStephen Hadley kunye no-Nobhala welizwe u-CondoleezzaRice ngokufumana ukhetho lwesithathu. Isisombululo sivela kwi-US Strategic Command, ejongene nezixhobo zenyukliya zelizwe.
Ukuqhutywa kwemephu kuyanyamalala
Ukusebenza ne-NSA, bacebisa iqhinga lokulibaziseka elinokucothisa inkqubo yenyukliya yase-Iran kunye nokufumana ixesha lobuchule kunye nezohlwayo, ngethemba lokuthintela umlo wonke. Ukufezekisa oku kulibaziseka, i-US StratCom kunye ne-NSA bacebise uhlobo olutsha lwesixhobo esingazange sisetyenziswe yi-United States okanye nasiphi na esinye isizwe: isixhobo se-cyber esingachaphazeli kuphela iinethiwekhi zekhompyuter zaseIran, kodwa eneneni zonakalisa ukutshatyalaliswa komzimba ngokupheleleyo bathatha inethiwekhi ezifanayo. Ke uStuxnet wazalwa phantsi kwegama lekhowudi iMidlalo yeOlimpiki.
Ekhokelwa yi-NSA, injongo yeMidlalo yeOlimpiki yayinomdla: ukuqhekeka kuthungelwano lweekhompyuter zezona zixhobo zenyukliya zikhuselwe kakhulu e-Iran kunye nokutshabalalisa i-centrifuges zokuchumisa nge-elektroniki ekujoliswe kuyo. I-uranium eluhlaza ineesotopu ezimbini, U-235 kunye no-U-238. Ukwenza ibhombu, kufuneka i-90% i-U-235 emsulwa, kodwa i-uranium engacaciswanga iqulethe malunga ne-0.7% U-235.
Ukwenza i-uranium yebanga lezixhobo, i-uranium ore ekrwada ixutywe ne-hydrofluoric acid ukwenza igesi ethi emva koko ityelwe kwisentrifuge ejikeleza ngaphezulu kwe-100,000 ye-rpm okanye ngokukhawuleza kunesantya sesandi. Kuba i-U-238 imalunga ne-1% inzima kune-U-235, ii-athomu ze-U-238 zicinezelwe kwiindonga ze-centrifuge, kwaye irhasi esembindini enee-atom ezixineneyo ze-U-235 iyakhutshwa kwaye ityiswe kwenye icentrifuge. Le nkqubo iphindaphindwa kaninzi, kudityaniswa iityathanga elide kwiibhanki, de kube kugalelwe umxube wegesi ococekileyo kunye noxinaniso oluphezulu lwe-U-235.
Ngenxa yesantya esimangalisayo secentrifuge egxile kuyo, zithambile; impazamo encinci yezobuchwephesha okanye ukuguquguquka ekusebenzeni kunokubangela ukuba uphume kulawulo kwaye uzikrazule kwaye uqhekeze yonke into ekujikelezile. Yiyo le mpazamo ukuba i-Olimpiki ijolise kuyo. Ukufezekisa injongo yayo, iMidlalo yeOlimpiki iya kuqhubeka ngokwamanqanaba- okokuqala 'isibane' siya kufakwa kuthungelwano lwekhompyuter lweNatanz kunye nezinye izibonelelo zokuphucula.
Le bhikhoni ibiza kuyenza imephu ngokupheleleyo kwinethiwekhi kwaye emva koko 'ibize' ibuyele kwi-NSA ngeenkcukacha zokhuselo kunye nokunxibelelana kweecentrifuge nekhompyuter yabo elawula ikhaya '. Inguqulelo entsha, esebenzayo ye-malware iya kuphuhliswa iphinde ibuyiselwe kwinethiwekhi ye-Iranian, apho ibilele khona iiveki kwaye ibeke iliso kwimisebenzi yemihla ngemihla yeziko ngaphambi kokuba lisebenze. Nje ukuba isebenze, i-malware ngobuchule iya kudlulisela imiqondiso yokusebenza okuqhelekileyo kubantu abajonga iinkqubo zekhompyuter ngelixa beqala ukuhlasela.
Ngaphakathi kwiziko labo lolawulo, iinjineli zaseIran azizukuyazi le nto. Imayile kude, ii-centrifuges ezijikeleza ngesantya sesandi nayo yonke into esendleleni yabo ikrazukile. Kuba injongo yeOlimpiki yayikukulibazisa inkqubo yenyukliya yaseIran, iStuxnet kwafuneka ingabonakali ngokupheleleyo kwaye ingabonakali - ukuza kuthi ga ngoku yayiyilelwe ukuba ingaze ihlasele kabini ngendlela efanayo, ishiya izazinzulu kunye neenjineli zikhathazekile kwaye zikhombe kuwe ukutyholana ngetekhnoloji engalunganga okanye ngamashwa nje.
Ekuqaleni, uMongameli uBush uvakalise ukuthandabuza malunga nokubanakho kwe-computer elula-oko kukuthi, de umcebisi omkhulu kwezokhuseleko kuzwelonke waphosa inkunkuma yecentrifuge eyatshatyalaliswa kuvavanyo oluyimfihlo ngqo kwidesika yakhe. IiOlimpiki zamkelwa ngokukhawuleza. Nangona kunjalo, njengonxibelelwano oluninzi lomkhosi kunye noRhulumente ngelo xesha, iinethiwekhi zekhompyuter zaseIran zakhuseleka ngokuzinqamla ngokupheleleyo kulo naluphi na uqhagamshelo lwe-intanethi kusetyenziswa indlela eyaziwa ngokuba yi 'air gapping'.
Ukunceda ibhulorho yeOlimpiki yavala lo msantsa, i-NSA yaqala ukusebenza nabalingani bayo bakwa-Israyeli, ababeqokelele ulwazi olubanzi malunga nabasebenzi baseIran kunye namaziko. Ngokudibeneyo, i-US kunye ne-Israel baqulunqa uluhlu lwezazinzulu ze-Iranian kunye neenjineli ezineempawu ezimbini ezibalulekileyo: babenofikelelo ngokwasemzimbeni kwizibonelelo zokuphucula kwaye babonisa iindlela ezikhuselekileyo zokhuselo lwe-elektroniki emva koko bajolise kwi-malware kwaye bosulela ii-laptops zabo kunye ne-flash drive kwi-Intanethi. Xa babenxibelelana neenethiwekhi ezikhuselekileyo eNatanz nakwezinye iindawo ukuze benze umsebenzi wabo, iStuxnet emva koko yaxhuma yabuya yabuya ngokukhululekileyo-inika ngokufanelekileyo i-US kunye ne-Israel ukufikelela ngokugqibeleleyo.
Imidlalo yeOlimpiki yaqala ukusebenza ngo-2006 yaza yahlala de kwaba ngu-2010 xa inguqulelo entsha ye-Stuxnet malware ngokungalindelekanga yaqala ukuziphindaphinda kwi-Intanethi, isulela izigidi zeekhompyuter kwihlabathi liphela. Nangona ingenabungozi ekubeni yayenzelwe ngokukodwa ukuba isebenze kuphela kuthungelwano lwezityalo zenyukliya zaseIran, ikhowudi yemithombo ye-malware ngoku yayifumaneka esidlangalaleni kwaye ulwazi ngemvelaphi yayo e-US nase-Israel yayingumbandela wexesha. Omabini la mazwe atyhola ityala lokukhutshwa okungalindelekanga kodwa aqhubeka esebenza kunye, echitha ngempumelelo iphulo lonyaka omnye ngaphandle kokutshitshiswa kweStuxnet ziinjineli zekhompyuter kwihlabathi liphela.
Ekugqibeleni, ukusebenza kukaStuxnet kusaxoxwa ukuza kuthi ga kulo mhla, kodwa uninzi luyavuma ukuba intsholongwane ilibazise inkqubo yenyukliya yase-Iran iminyaka kwaye ithintele i-Iran ekuphuhliseni isixhobo senyukliya ixesha elide ngokwaneleyo ukuba isizise kwitafile yothethathethwano- iyonke thintela imfazwe kwezona ziqhushumbisi. Ummandla kwihlabathi. Kwaye ngelixa ungenabo oomatshini bokucebisa ngenyukliya ekhaya, kukho iintsholongwane apho eziza kuzama ukuba iphasiwedi yakho ukuba awuyazi indlela yokuzikhusela ngomphathi wegama eligqithisiweyo elenza kube lula kuwe ukulawula isazisi sakho sedigital Nokuba ulungile kwiikhompyuter okanye hayi, iDashlane kulula kakhulu ukuyisebenzisa! Ukwenza ubomi bokubonisa kwabasebenzi kube lula, sonke saqala ukusebenzisa iDashlane. Zama iDashlane simahla ngokupheleleyo kwiintsuku ezingama-30 kwaye ufumanise ukuba kunokuba lula kangakanani ukuba ube negama eligqithisiweyo iphasiwedi! ungasebenzisa iDashlane ukuvelisa iwebhusayithi ekhuselekileyo.
Ukhuseleko lukaDashlane lulungile, kodwa ukugcwalisa ngokuzenzekelayo kuyonwabisa ukusebenzisa: awusoze uphinde ungene kwenye iwebhusayithi, iDashlane iyenzela yona ngokuzenzekelayo! I-Dashlane iyafumaneka kwii-PC, ii-Mac, ii-iOS kunye nezixhobo ze-Android, kwaye xa usebenzisa iDashlanePremium, ungavumelanisa amagama akho kunye nokuqinisekisa iziqinisekiso kuzo zonke izixhobo zakho. Khuseleke ngakumbi ngelixa uxhasa umboniso we infographics usebenzisa ikhowudi ye infographics. kwaye ufumane i-10% kwi-Dashlane Premium kwasekuqaleni ngokundwendwela dashlane.com/infographicsshow okanye ucofe ikhonkco kwinkcazo.
Ke ucinga ntoni malunga nokusetyenziswa kwe-US ne-Stuxnet yase-US? Isabotage kunye nezozakuzo ziya kuthintela amazwe anamandla ekuphuhliseni izixhobo zenyukliya, okanye ngaba umngcipheko wokwanda kwenyukliya mkhulu kakhulu kuyo nayiphi na into engaphantsi kobundlobongela basemkhosini? Sazise iingcinga zakho kwizimvo! Jonga elinye inqaku elibizwa ngokuba yi-Iran vs. kwaye ungalibali ukuthanda, ukwabelana kunye nokubhalisa. Kude ibe lilixa elizayo!
Ndiyisusa njani idashlane?
Kwimenyu yokulawula usetyenziso lwakho, uya kubona uluhlu lwazo zonke usetyenziso olufakelweyo. Cinezela phambiliUDashlaneApha.
Khangela iUDashlaneapp icon.
Bamba umnwe wakho kwi icon ide ibe nkulu.
Yisa kwindawo yokuKhupha kwindawo ephezulu ngasekunene kwesikrini.
Molo, ndingu-Amy kwi-cybernews.com Umthombo wezigqibo ezikhuselekileyo kwi-Intanethi Abaphathi begama eligqithisiweyo baye baba yindlela eyaziwayo yokukhuseleka kwe-cyber kule minyaka imbalwa idlulileyo, kunye nesidingo esikhulayo kuye nabani na onesiqinisekiso esingaphezulu kunesokugcina umkhondo. Bavumela abasebenzisi ukuba bagcine kwaye baphathe iiphasiwedi ezizodwa nezintsonkothileyo, phantse akunakwenzeka ukubamba ngentloko iipaswedi ezizodwa kunye nezintsonkothileyo kwiakhawunti nganye, kunye nokugcina uxwebhu okanye iphasiwedi engakhuselekanga kwikhompyuter kukushiya usengozini yokuxhatshazwa ngomnye wabaphuli mthetho beCyber uninzi lweempawu ezintle, nangona uninzi lwazo lungavulwanga ngaphandle kokuba uneakhawunti yeNkulumbuso.
Siza kufika emva koko. Sifuna ukujonga ngakumbi lo mphathi wegama elithandwayo. Kuya kufuneka ube nomphathi wegama eligqithisiweyo nokuba ungathini, kodwa kuya kufuneka ujonge kude kune-dashlane masingene ngaphakathi kwaye ufumane into ebalulekileyo ekuthatheni isigqibo sokuba yeyiphi umphathi wegama eligqithisiweyo elilungele ukuba uhlalutye kwaye uqonde amanqaku alo ubone eyona nto inokunikezela ngayo.
I-Dashlane ikuvumela ukuba ugcwalise iifom kunye newebhusayithi, kwaye ufake iinkcukacha zoqhakamshelwano ezifana negama, i-imeyile kunye nenombolo yefowuni, nkqu nePaypal yakho, kunye namaxwebhu okuchonga afana nelayisensi yakho yokuqhuba okanye ipasipoti, ikwanayo nesixhobo esiluncedo esibizwa ngokuba ziindawo ezikhuselekileyo ikuvumela ukuba ugcine kwaye ubethele ulwazi oluntsonkothileyo, olufana nokuqinisekisa ukuba akukho lwazi lwakho lomntu luye lwasuswa kwaye kwabelwana ngalo kwiimbombo ze-intanethi, yenza iDashlane inyathelo elingaphaya komphathi wegama eligqithisiweyo lokuphononongwa ngokunzulu kwawo onke amanqaku U-dashlane kufuneka anikezele Cofa kwikhonkco elingezantsi kwiNkcazo d kuluhlu olubanzi lweDashlane. Xa kuziwa kwi-web mobile kunye nokuhambelana komsebenzisi, i-dashlane isebenza ngokuthe ngqo kunye namakhulu eewebhusayithi, ukuze uhlaziye iipaswedi zethu ezihlaziyiweyo okanye eziphindaphindwayo ngaxeshanye, endaweni yokuba ngamnye atyelele iwebhusayithi ngokukodwa ukuze ahlaziye okanye ahlaziye iipasile kunye nokubonelela ngeEdge ngeenkcukacha zokuzalisa ngokuzenzekelayo kunye neziqinisekiso zokungena ngokuzenzekelayo kwiiakhawunti ezintsha ukunika abahlobo kunye nosapho okwexeshana okanye ukufikelela ngokupheleleyo kwiakhawunti, kodwa kuphela ukuba baneakhawunti yeDashlane ngokwabo, ikwabonelela ngeVPN kwindawo yayo yeprimiyamu evumela ukuba i-intanethi ikhuseleke ngokufihlakeleyo Qinisekisa ukuba idilesi yakho ye-IP kunye nedatha yabucala ihlala ikhuselekile kwaye ifihliwe Oku kungumda wokuhamba kunye nokufikelela kumaseva kumazwe angaphezu kwama-30 Isicwangciso sePrimiyamu ngokuqinisekileyo sikwicala elibiza kakhulu ngezicwangciso eziqala nge-39.99 ngonyaka, ixabiso elincinci ukuhlawula kukhuseleko lwegama eligqithisiweyo, kodwa isabiza kakhulu xa kuthelekiswa nabantu abakhuphisana nabo.
Ukugcinwa kukwafakwe kwigigabyte, leyo yeyokwanela abantu abaninzi, kodwa kunokuba kuhle ukuba wenze okuninzi Ukuba uthembele kumanqaku ayo akhuselekileyo, icebo lasimahla linokukunika amanqaku amaninzi, kodwa kukho ezinye izithintelo omele uzazi malunga neetalfeature zesicwangciso sasimahla xa kuthelekiswa nabanye abaphathi bephasiwedi abakhuphisanayo akukho mntu ufuna ukubambeka kwi-pickleso Ngokupheleleyo, ngaba inkxaso yabathengi intle kakhulu? NgoLwesihlanu, okuhamba epakini xa kuthelekiswa nabanye abaphathi begama eligqithisiweyo abanikezela kuphela iziseko zolwazi okanye inkxaso ye-imeyile, idashlane yeyokuqala kwaye iphambili ikhuselekile, kwaye okona kubaluleke kakhulu, siqwalasele amanqaku ayo okhuseleko ukuqinisekisa ukuba ngumboneleli okhuselekileyo ngokwenene kwaye kweli Sebe alidanisi ukufumana ubhalo olufanayo lomgangatho wasemkhosini osetyenziswa ziiarhente zikarhulumente kwihlabathi liphela - iipassword zakho azinakukhuseleka ngakumbi noDashlane. Xa usebenze, unokulindela ukungqinisisa kwezinto ezimbini xa ungena ngemvume, okongeza ukhuseleko olongezelelweyo ekungeneni kwakho. Ezinye izinto ezenziwayo zokhuseleko ziyaphunyezwa, ezinje nge: kwaye igcinwe ngokukhuselekileyo kwisixhobo sakho, ngokuchaseneyo neeseva ezivela kwiLifu okanye iDashlane.
Oku kuthetha ukuba akukho mntu wumbi uya kuba nokufikelela kwidatha yakho, nditsho nabasebenzi baseDashlane nayo yonke into esinokuthi ngokukhuselekileyo ukuba ngaphandle kwexabiso layo eliphezulu, uDashbane unendawo yokugcina encinci kunye nezinto ezisimahla zokugcina iphasiwedi yakho ikhuselekile kwaye ikhuselekile gcina ngakumbi nge Isicwangciso sayo sePrimiyamu esityebileyo esenza ukuba ibe lula kwaye kube lula ukuyilawula kangangoko kunokwenzeka Umphathi wegama eligqithisiweyo elisebenzisekayo Ukuqaqamba kukubheja okukhuselekileyo Ngaba ukhe wasebenzisa iDashlane okanye nawuphi na umphathi wegama eligqithisiweyo, ukuba kunjalo, bekunjani kwaye ungacebisa ukuba umhlobo okanye ilungu losapho, masazise kwizimvo ezingezantsi kwaye ungalibali ukuthanda nokurhuma ngaphezulu kude kube lixesha elizayo
Ifakwa phi idashlane?
Ngamanye amaxesha kwaye ixesha elininzi kwiindawo zomsebenzi, i-IT / abalawuli banokuthintela iifayile ezenziweyo ukuba zisungulwe kwifolda yeAppData, aphoUDashlanengokweneneifakiwe.
USteve Dotto apha. Uyenza njani isihogo ngale mini intle kangaka? Mna? Ewe ukuba uyayazi inyani, kuyandicaphukisa ukuba ndenza olu hlobo lwedemo kwakhona, kodwa ndifundile amabali amatsha athi abantu abagawuliweyo bePassword basancanca. Kuyabonakala ukuba iipaswedi ezimbi kakhulu zika-2014 zazintle kakhulu iipaswedi zika-2013.
Isicelo somncedisi wenamba
Elona gama liligqithisiweyo # 1 beliphinda 1234456. Liqaqambile ukuba uyalisebenzisa. Igama lesibini elidumileyo ligama elithi 'iphasiwedi'. ”Njengegama eligqithisiweyo kunye nokuqhubeka ngaphandle kolawulo olubi lwegama eligqithisiweyo.
Nanku umceli mngeni esijongene nawo. Xa uneeakhawunti zakho kwaye unegama eligqithisiweyo elibi, iphasiwedi efanayo iphindaphindwe okanye iphasiwedi ebuthathaka, umceli mngeni esininawo) Phantse zonke iiakhawunti zethu ziqhotyoshelwe kwidilesi ye-imeyile. La ngamagama e-akhawunti yethu, ke kulula kakhulu ukuba asichonge, nokuba yeyiphi okanye iprofayile yethu kuFacebook.
Xa sinegama eligqithisiweyo leveki nganye kwaye enye yeakhawunti esinayo. ukuba bajongana ne-getcompromised ke abayi kuba nokufikelela kwi-password yethu kuphela kodwa nakwigama lethu elinokuthi liguqulele kwiiakhawunti ezininzi oko kuthetha ukuba banokufikelela kolunye ulwazi. Oko kukodwa kuya kukubeka ecaleni ibhulukhwe, kodwa ukuba ufika kwinqanaba apho uninzi lweebhulukhwe zisenzeka kwaye inkampani ayazi ukuba ukwaphulwa komthetho kwenzeke iiveki okanye iinyanga ngaphambi kokuba yenzeke kwaye emva koko basazise, ​​iya kuba ixesha elithile mhlawumbi leenyanga apho abantu banokufikelela kuyo yonke into malunga nawe kwaye akukho nto uyaziyo ngayo.
Oku kukubeka emngciphekweni, kwaye kubeka umqeshi wakho kunye nabahlobo bakho kunye nosapho emngciphekweni kuba bakholelwa ukuba ulwazi oluthumela kubo lulwazi oluthembekileyo oluvela kumthombo onokuthenjwa. Abayiqondi indlela embi ngayo ukhuseleko lwakho lokubeka nabani emngciphekweni. Ingxaki enkulu kwaye yinto ekufuneka siyenzile malunga nayo kwaye akukho nzima ukuyenza ngayo.
Ndikubonise ukuba kwixa elidlulileyo usete njani i-LastPass yintoni umphathi wepassword endiwusebenzisayo. Kunzima kancinci ukuyisebenzisa kwabanye abantu ngendlela. Kuthatha ukuqhela.
Ke kutshanje ndifumene omnye umphathi wegama elikwi-vein efanayo ne-LastPass, kodwa mhlawumbi kulula kancinci ukuyisebenzisa. Ibizwa ngokuba yiDashlane kwaye iphantsi kakhulu. Inye into endiyithandayo ngeLastPass kukuba kukuthengiselana ngexabiso ukuze ke ndifake iDashlane kwinkqubo yam kwaye kwaye ndiza kukuhamba nje kwizinto ezimbalwa ezibaluleke kakhulu ukuzama ukuba uqonde ukuba kusebenza njani kwaye kulula kangakanani oku wena, izibonelelo ezinokuba zezi nokuba asinakukusa kwenye yezi okanye kwabanye abaphathi begama eligqithisiweyo.
Ke kwakhona namhlanje kwiDottoTech, ngabaphathi begama eligqithisiweyo. Ndiyazi ukuba ndiqala ukuvakala njengebhere enomsindo kuba ndihlala ndibuyela kwisihloko esinye. Ngaba ndivakala ngathi ndinomsindo? Iintsuku zenkqubo yam ye-TV bendikulawulo olusebenzayo lwabantu kwaye siyazi ukuba kwiimeko ezininzi ndiza kuhlala ndilwa kwaye ndiyathemba ukuba abantu bayayifumana ngelinye ixesha.
Ke ndiyifakile le intsha ibizwa ngokuba yiDashlane endifuna ukukubonisa yona ngokundwendwela iDashlane.com. Ubona iintengiso ezininzi.
Sele uqhuba intengiso ezininzi ngayo mva nje. Yinto entle, elula ngumphathi wegama eligqithisiweyo, kodwa eyona nto iphambili kuyo kukuba unqamle kwiqonga elifanayo kwaye ulisebenzise kwiikhompyuter zethu, kwiincwadana nakwizixhobo zethu eziphathwayo, ezibalulekileyo. Kwakhona, ubukhulu becala, uya kuyisebenzisa kwisikhangeli sakho okanye isixhobo esiphathwayo ngokuseta okusisiseko kuba ndicinga ukuba ukuseta kulapho abantu abaninzi bema khona kwaye babambeke.
Unoloyiko lokwenza unqakrazo lokuqala kwaye ngandlela ithile ungene kwinkqubo. Ungaqala ngeakhawunti yasimahla. Ungayiphucula ipremiyamu nanini na kwaye inkonzo yeprimiyamu ixabisa i-40 yeedola ngonyaka kule meko.
Ingaphezulu kunokuba ndihlawule i-r LastPass, kodwa isengqiqweni iidola, ngakumbi xa kuthathelwa ingqalelo ukuba abanye abaphathi begama eligqithisiweyo babiza. Ke kwinguqulelo yasimahla, ufumana umphathi wegama eligqithisiweyo, isoftware efakela kwidesktop yakho, kodwa kunye nolwandiso olufakelwe kubakhangeli bakho kuba kulapho uyisebenzisa khona kakhulu. Unomsebenzi wokugcwalisa ngokuzenzekelayo, isipaji esihle sedijithali ekufanele ukukunceda kwilizwe le-e-commerce, ugcine amakhadi akho etyala kwaye uwenze alunge ngakumbi kwaye asebenze nawo onke amaqonga.
Into ongayifumaniyo ikakhulu kukuba awukwazi ukuvumelanisa kumaqonga akho onke. Le yinto enkulu apha. Awuyi kufumana i-backup enokuba yinto enkulu, kodwa eyona nto inkulu ndicinga ukuba awunakuyivumelanisa nee-smartphones zakho njl.
Ngokwenyani kuphela yidesktop, kodwa ikunika umbono wokuba isebenza njani. Ungadlala ngayo kwaye uyisebenzise okwethutyana. Unokufaka i-LastPass, udlale ngayo, kwaye emva koko uthathe isigqibo sokuba yeyiphi ofuna ukuyitshintsha xa utshintshela ekuhambeni.
Enye yezinto ezipholileyo malunga noDashlane endizithandayo sisakhono sokwabelana ngamaphasiwedi. Unenguqulelo yequmrhu okanye yeqela elikwi-ofisi apho unofikelelo lwexesha elifutshane kwiakhawunti yomthengi okanye izinto ezinje kwaye ufuna ukunika ukufikelela kumalungu eqela. Ukuba abantu abaninzi bane-Dashlane, ungabelana ngolwazi lweakhawunti kunye nokufikelela kwindawo ekhuselekileyo, eyindlela entle epholileyo, kuluncedo kakhulu ukuba uhamba phesheya kwaye ufuna ukunika ilungu losapho ukufikelela kwiakhawunti yabo yebhanki ngelixa wena ' kude, ungakwenza oko nge-Dashlane ukuze ungathumeli ulwazi lwe-akhawunti eluntwini, ngandlela thile kwii-imeyile okanye ngeimeyile ezininzi okanye into enjalo.
Olu ngumahluko osisiseko phakathi kweenguqulelo. Nje ukuba uyifakele, inkqubo ilungile ngokuthe ngqo. Kwinguqulelo yeMac ndikhuphele usetyenziso kwaye le app ilapha endiyifakileyo.
Xa ndafaka usetyenziso, into yokuqala endacelwa ukuba ndiyenze yayikukusetha igama eliyimfihlo eliyintloko. Ke kuya kufuneka wenze ipassword elungileyo ukuba uyikhumbule, kwaye iphasiwedi eyintloko ilawula onke amanye amagama agqithisiweyo. Ibagcina bebhalwe ngokufihlakeleyo nangasemva kwe-firewall.
Ke kuya kufuneka ubeke iliso kwiphasiwedi yakho eyintloko. Kufuneka ubuncinci ibe namanani asibhozo ubude kwaye iqulethe zombini oonobumba abakhulu kunye namanani. ilungile kwaye ifihlakele kangangoko kunokwenzeka.
Nje ukuba oko kusetelwe, baya kukhangela ikhompyuter yakho kwaye bajonge kwisikhangeli sakho ngamagama agqithisiweyo kunye neeakhawunti ezenzekileyo esele zilungisiwe kwisikhangeli sakho kuba uyazi ukuba uqhuba njani kwimisebenzi yakho yemihla ngemihla, ngamanye amaxesha isikhangeli sakho sigcina iphasiwedi kunye neakhawunti yeakhawunti. ulwazi. Isusa yonke loo nto kwizikhangeli zakho kwaye ikuvumela ukuba usete njengoluhlobo lweakhawunti yokuqala. Ininzi yale nto ndiyenzele ngokwam, ziiakhawunti zangempela ezingasokuze ndiphinde ndizisebenzise kuba ndiyise yonke into kwiLastPass, kodwa isinika isiseko sokusebenza kulo mboniso.
Emva koko bacele imvume yokufaka ulwandiso lwesikhangeli seDashlane kwisikhangeli sakho. Ndiye ndayibaleka kwalapha kwiChannel, kwaye ungabona ulwandiso lwesikhangeli kwikona apha. Ngapha koko, yindlela esebenza ngayo iLastPass.
Uninzi lwabaphathi begama eligqithisiweyo lufakelwe ufakelo lokongezwa. Oku kuqaphele ukuba ndineFirefox, iChannel kunye neSafari. Ifakelwe kuzo zonke kwaye ivumelanisa nazo zonke ngaxeshanye.
Ungqamaniso kuhlobo lwepremiyamu luvumelanisa phakathi kwezixhobo hayi kwikhompyuter enye ukuba iyavakala kuwe. Nje ukuba kwenziwe oko kulula kakhulu. Nazi iiakhawunti ezifumanekileyo kwaye zacwangciselwa mna.
Iyadlula kwaye isivumela ukuba silawule iiakhawunti zethu kolo hlobo lwendalo, kuloo brawuza yendawo. Kodwa into endiyifumana iluncedo ngenene kukuba xa sele simisile singangena kwideshibhodi yezokhuseleko kwaye ithi thina yintoni amanqaku akho okhuseleko. Ngoku eyam iphantsi kakhulu, kodwa njengoko benditshilo, ezi ziakhawunti ezindala ezingasasebenziyo kwakhona.
Ekukhangelo, kwii-akhawunti ezingama-25 ezingenisiwe, ezili-18 zazinamagama agqithisiweyo kwaye ali-14 ayephindaphindiwe. Masidlule kuloo nto kwaye siyicoca. Isivumela ukuba siqale le nkqubo kanye kule festile ngokunqakraza kwiiphasiwedi kwaye sizitshintshe, sihamba ngawo onke amagama okugqitha kunye nokuwahlaziya.
Akunyanzelekanga ukuba uze neepaswedi ezininzi. Yenza ngokuzenzekelayo iiphasiwedi ezifihlakeleyo ze. Konke okufuneka ukwenze kukukhumbula eli gama lokugqithisa eliyintloko.
Ngoku ukuba ufuna ukutyelela iwebhusayithi ekhuselekileyo kwaye ungene kwiakhawunti yakho, zininzi iindlela onokuyenza ngazo ngeDashlane. Ungacofa apha kwiwindow yesikhangeli, cofa isixhobo kwibar yesixhobo kwaye iya kuthi gqi zonke iiwebhusayithi ezahlukeneyo onamaphasiwedi kuzo. Ungaya kubo ngokunqakraza kwi icon apho kwaye iya kukusa kuyo kwaye uya kungena kwi-akhawunti ngokulula.
Igudile kakhulu. Ndiyithanda kakhulu loo nto. Oku kuhle kwaye kuyathandeka.
Iphantse yafana nenkonzo yenqaku abanalo apha. Kwelinye icala, kuya kufuneka ungene kwiLastPass, umphathi wegama eligqithisiweyo endikhe ndalisebenzisa ukuza kuthi ga ngoku, kwaye uchwetheze iphepha ngalinye kuwo. Uyabona ukuba imenyu yabo iluncedo ngakumbi.
Inokuba namandla ngakumbi kwezinye iindlela, kodwa incinci isebenziseka lula, ukuze uxele umahluko phakathi kweziapps zimbini nje ngento enye phaya, kodwa ngokusisiseko yinkqubo ohamba kuyo, xa ungena kunye iakhawunti, yiya nje kwiakhawunti endinokufuna ukungena kuyo. Mandi phume kwiakhawunti yam kaGoogle kwaye ndizokubonisa okwenzekayo. Ndiya kwiWordPress.
Ndiya kwisiza seWordPress. Ukuhamba kwakhona thina. Ndiza kungena kwiWordPress.
Ukuba ndisiya apho nantsi into eyakwenzeka, uya kubona into eyenzekileyo apha ukuba uDashlane ubize zonke iiakhawunti ezahlukeneyo zeWordPress endinokufikelela kuzo xa ndizokubona ukuba ndikweliphi iphepha. Inceda ukuba ndingene. Sinokusebenza kwalapha.
Kananjalo, ngesiqhelo xa ujonga ngaphakathi kwibhokisi yencoko yababini, uya kucofa ujonge ngaphakathi kwibhokisi yencoko yababini apho. Ukuba unayo inye kuphela unokucofa kuyo kwaye iya kubonisa ipaswedi yesiza esithile uqobo. Kule meko apha ndibona iiphasiwedi zokugqibela ze-LastPass kuba i-LastPass ifakiwe kwaye izinto ziyabhidana nje.
Kodwa ngokusisiseko unokucofa kuyo nayiphi na ibhokisi yencoko yababini xa uza kungena. Olunye uphawu oluza kuyenza kukuba luya kujonga ukugcwalisa ngokuzenzekelayo. Ke nawe ufake lonke ulwazi lwakho olusisiseko, igama lakho, usuku lwakho lokuzalwa, nedilesi, kwaye iya kuba nabantu abahleliyo kunye nabantu abazenzekelayo.
Ulwazi oluza kuwe ngemvume yakho kunye newebhusayithi oyindwendwelayo okuyinzuzo enkulu. Iya kwenza okufanayo kwinkqubo yakho yokuhlawula ukuba uyafuna ukugcina amakhadi etyala ukwenza intlawulo kwi-Intanethi kube lula kancinci ezakusebenza kakuhle kule ndawo. Into yokugqibela endifuna ukukubonisa yona ngaphambi kokuba ndihambe liziko lokwabelana onokuthi wabelane ngalo ukuba unomnye umntu ofuna ukwabelana naye ngegama elinegama likaDashlane kwaye kukho inqaku kwindawo ohlala kuyo onokwabelana nabo, ungabelana I-imeyile kunye nabo eya kubathumela i-imeyile ejongeka ngokuchanekileyo ngoluhlobo.
Makhe ndiye kuhlaziyo lwam apha. Kulapho kanye. Uthumela i-imeyile kunye negama lokugqitha.
Igama eligqithisiweyo alivuliwe, kodwa ngokusisiseko une-HTML okanye ikhonkco lewebhu onokuthi ucofe kulo oza kuthi emva koko uqalise usetyenziso ukuze ubanike ukufikelela kwi-app, elungileyo ukuba uyinkampani yenkonzo kwaye umntu othile unokufikelela kuyo Kufuneka unikeze iphepha lakho le-Facebook ixesha elifutshane okanye into enjalo. Ungabenza ukuba bangene ngolu hlobo lwendawo ekhuselekileyo apho ulawula ukufikelela ixesha elithile. Leyo yenye yeempawu ezintle zikaDashlane.
Uyicinge kakuhle le meko yeqela. Okukwintsusa, andikhathali ukuba usebenzisa i-LastPass, ukuba usebenzisa isixhobo esinjenge-OnePassword, ukuba usebenzisa i-KeyPass, ukuba usebenzisa iDashlane, unokufumana enye ethetha nawe ocinga ukuba uya kuyifumana kwaye ungaqala ukusebenzisa. Linyathelo elinye kuphela kwinkqubo yokhuseleko.
Kuya kufuneka wenze ubunyani bezinto ezimbini esinenqaku ekufuneka ujonge kulo kwaye ulisebenzise. Le yeyona ndlela ilungileyo yokwandisa inqanaba lakho lokhuseleko, kodwa eli linyathelo lokuqala- igama lomsebenzisi elilungileyo kunye nolawulo lwegama eligqithisiweyo. Ndicinga ukuba uDashlane, ndiza kukunika isithupha esikhulu.
Ndiyayithanda imbonakalo yomsebenzisi. Andiqinisekanga ukuba ndiza kutshintsha kwi-LastPass kuba ndiqhele ukusebenzisa i-LastPass kwaye ndinayo ixesha elide, kodwa ukuba ndiqalisile andiyi kuthandabuza ukuba inyathelo lam lokuqala linyathelo lokuqala kwiDashlane. Ndicinga ukuba sisingeniso esihle.
Ndiyathemba ukuba ulifumene eli nqaku liluncedo namhlanje. Khumbula ukuba zintathu iindlela zokugcina unxibelelwano nathi apha kwiDottoTech. Kuqala, nceda urhumele kweli jelo.
amanqaku e-crusader microsoft
Okwesibini, rhuma kwincwadana yethu kwaye uya kuva ngazo zonke iziganeko zethu eziphilayo. Okwesithathu, iDottoTech yenye yeendawo ezifumana inkxaso-mali kuluntu. Sinenkxaso yakho, abantu ababukela la manqaku.
Ukuba ufuna ukwazi ukuba inkxaso yeDottoTech ithetha ntoni kwaye iziphi izibonelelo ezinayo, kuba kukho izibonelelo ezinje ngokufikelela simahla kwizifundo zethu ezintle, jonga kwiPatreonpage yethu kwaye ubone ukuba yeyiphi inkxaso yeDottoTech malunga ayikhathali. yeyiphi indlela, nceda uhlale unxibelelana. Ndikhangele phambili ekuboneni kwakhona kungekudala. NdinguSteve Dotto, ndizokubona kwixesha elizayo.
Yonwaba xa uhlasela inqaba.
Yintoni idashlane EXE?
OkweneneUDashlane.izembeifayile licandelo lesoftwareUDashlanebyUDashlane.UDashlanengumphathi wegama eligqithisiweyo kunye nesipaji sedijithali. ...UDashlanesisicelo esigcina kunye nokufumana kwakhona amagama agqithisiweyo apha ekhaya ngelixa uwagcina ngegama eligqithisiweyo eliyimfihlo. Inkqubo inokugcina ulwazi lwekhadi letyala kunye nekhadi.
Ngaphambi kokuba ubukele eli nqaku ukuze uqiniseke ukuba awuyirobhothi, nceda ujonge kule mifanekiso kwaye uchonge iimpawu zendlela, iimoto, imibhobho yokubasa umlilo, imida yevenkile, iinombolo kwiminyango engaphambili kunye nokudakumba okusoloko kukhula. Ngasekupheleni kweminyaka yama-90, iAltaVista yayiyeyona injini yokukhangela ithandwayo kwaye babenengxaki yogaxekile. Abantu babebhala izikripthi ezizenzekelayo ukuthumela ispam kunye namakhonkco onobungozi kwiziko ledatha labo elenziwe kakuhle, kwaye kuye kwafuneka bongeze uvavanyo olunokupasiswa ngabantu kuphela.
Isisombululo sabo yayikukongeza umbuzo kwifom yokungenisa eyayinokuphendulwa ngumntu kuphela ngelo xesha. Kwimeko yabo, ukuchonga uthotho olugqwethekileyo loonobumba kunye namanani yayiyeyona ndawo apho ikhompyuter inokuthi ibachonge ngokulula oonobumba abakhulu, kodwa yayingabalulekanga emntwini. Okanye ubuncinci obuncinci kumntu onamehlo alungileyo.
Iinguqulelo ezifikelelekayo azange zize okwethutyana. Kodwa leyo yayiyenye yeenguqulelo zokuqala ezikhutshiweyo zento eyaziwa ngokuba yi-CAPTCHA; Uvavanyo lokuZenzekelayo oluLungiselelwe uLuntu ukwahlula iiCompyuter kunye nabantu. Kwiminyaka embalwa kamva ingxelo ebizwa ngokuba yi-reCAPTCHA yaphuma: yayisetyenziselwa ukuskena iincwadi ezindala kunye namaphephandaba.
Xa kwakufuneka i-CAPTCHA, iqela liza kuthumela igama elikhutshiweyo elaziyo ukuba lichanekile, lijolise ngenjongo, kunye nelinye igama iinkqubo zabo zokuskena ezingaqinisekanga. Umsebenzisi kuye kwafuneka achwetheze zombini: igama eliqhelekileyo bekufanele ukuba lijonge ukuba ibiyimpendulo yomntu na, bekufanele bayifumane ngokuchanekileyo, kodwa igama elingaqhelekanga- emva kokuba abantu abalishumi elinesibini bevumile ukuba yintoni- njengenxalenye Ukuskena incwadi kungene. Ekugqibeleni uGoogle wathenga i-reCAPTCHA.
Kodwa ngelo xesha ugqatso lweengalo lwalusele luqhubekile. Abenzi be-bot babona i-reCAPTCHA njengomceli mngeni, kwaye bayenza kakuhle. Kuqala, banokuqeqesha iikhompyuter ukuba bafunde loo magama aqingqiweyo.
Oku kwakuphambi kwempumelelo yakutshanje yokufunda ngomatshini kunye nobukrelekrele bokuzenzela, kodwa nenkqubo ye-rudimentary inokuyicombulula i-reCAPTCHA ngokwaneleyo ngokwaneleyo ukuba ibe nabenzi be-bot benze ukubala kwe-ac kwaye ngamanye amaxesha bathumele ispemu. Ukuba uvavanyo belusenzima kakhulu, banokuhlawula abantu. Abenzi be-bot baseta iinkqubo apho i-automated bots igcwalise zonke iinkcukacha, ilungele ukuthumela ugaxekile, emva koko xa i-CAPTCHA inyuka, i-bots ibibonisile kubasebenzi abangabantu abaqeshwe kumazwe anengeniso ephantsi.
Aba bantu bahlawulwa ngokuhlala apho kwaye benze i-CAPTCHA emva kweCAPTCHA emva kweCAPTCHA. Emva kwayo yonke loo nto, kuvavanyo kuphela xa umntu ekwi-loop-ungasifumana isisombululo sakho seCAPTCHA kwisinye seenkampani, zonke ezikhuphisana ngexabiso kunye nokuchaneka. Ngapha koko, unako.
Ukwahlula i sec
Okanye unokufumana amalungu angalindelekanga oluntu ukuba asombulule ii-CAPTCHA zewebhusayithi yakho kunye, uh, ezinye iifoto abanye abantu abanokufuna ukuzibona (!) Kwaye ngaphambi kokuba batyelele kuya kufuneka babonakalise ukuba bangabantu ngokusombulula i-CAPTCHA Kwakhona i-Google reCA ikhuphe i-PTCHA inguqulelo yesi-2. Kulapho uzakunikezelwa khona ngebhokisi enye yokukhangela ekufuneka ucofe kuyo ukubonisa ukuba awuyirobhothi.
Kwaye kucacile, nayiphi na i-bots ethiwe thaca kule bhokisi yokukhangela inokunyaniseka kwaye ayizukuyicofa, inene malunga nokucofa ibhokisi. Ukuba ugcwalisa enye yezi CAPTCHA, idatha eyongezelelweyo iya kuthunyelwa. Kwaye uGoogle ulumke kakhulu malunga nokuba yeyiphi loo datha kuba nantoni na ayityhilayo ilukhokelo kubantu abazama ukuyicanda.
Kodwa le bhokisi ilayishwe kwisikhangeli sakho ukusuka kugoogle.com, okuthetha ukuba inokubona zonke iicookies zokungena esele zikhona uGoogle kwisikhangeli sakho. Ukuba ucoca iicookies zakho, uya kuba nakho ukufumana itshekhi yesibini ekucela ukuba uchaze iibhasi okanye izixhobo zokucima umlilo- kwaye mhlawumbi ikhangela ukuba imouse yakho ihamba njani na phambi kokuba ubethe ibhokisi? Kwaye eyona kanye Indawo kunye nexesha umnwe wakho ucofe isikrini sefowuni? Kwaye iqela lezinye izinto uGoogle azondla ngazo kwinkqubo yakhe enkulu yokufunda ngomatshini.
Abona bantu bazi ngokuqinisekileyo ngabayili kwaye abayitsho loo nto. Iinkonzo zesisombululo seCAPTCHA ngokuqinisekileyo sele zibonelela ngexabiso ngewaka ukusombulula oku. Kunganzima ngakumbi, kodwa ayinakutshatyalaliswa.
Ngokufunda ngomatshini, i-bots inokuqeqeshelwa ukugqitha ukuqinisekiswa kwesekondari kunye nokuzifihla njengabantu, ewe, ukuchonga amacandelo achanekileyo emifanekiso ebonisiweyo yinto onokuyisebenzisa ekufundeni komatshini welifu. Kwaye ekubeni iGoogle Cloud ithengisa iinkqubo zokufunda ngomatshini, kunokwenzeka ukuba ezinye iiseva zabo zenza iiseva ze-CAPTCHA kwaye abanye bazama ukuzaphula. Kwaye emva koko, unokugcina abantu behleli endaweni yokulinda endaweni yoko.
Ekupheleni kuka-2018, uGoogle wakhupha i-reCAPTCHA inguqulelo 3. Kwaye usenokuba sele upasile okanye usilele enye yezi ngaphandle kokwazi. Akukho bhokisi yokumakisha. akukho iiphazili eziza kusonjululwa: xa ukhangela indawo, uguqulelo 3 lusebenza ngasemva, lubukele okwenzayo.
Ngexesha lokushiya uluvo okanye ubhalise, uya kuba sele unikwe amanqaku ngokusekwe kwinto yokuba ungumntu. Kwaye apha kwakhona, uGoogle ulumke kakhulu xa kuziwa ekuthini bayenza njani le nto. Kodwa impendulo inokwenzeka kakhulu: 'Yinkqubo yokufunda ngomatshini abaphosa kuyo yonke into, kwaye abazi nokuba iyasebenza.' Ndiyathemba ukuba bayayithathela ingqalelo imo ye-incognito kunye nezixhobo zokufikeleleka, kuba ukuba ufumana amanqaku asezantsi, uluvo lwakho lunokuthunyelwa kwimodareyitha ukuze luphonononge ... okanye mhlawumbi inyamalale nje ibe lilize kwaye awusoze wazi.
Abavelisi beebhot ngokuqinisekileyo sele besebenza kumceli mngeni. Ndisayinele iakhawunti entsha yebhanki ine kwiinyanga ezimbalwa ezidlulileyo, kwaye kuye kwafuneka ndithumele ifoto yesazisi sam kunye nenqaku lam eliphethe eso sazisi ngesandla sam ndize ndiwangawangise. Oku akuqinisekisi kuphela ukuba ndingumntu, kodwa ikwanguye kuphela umntu endizibanga ndinguye.
Iibhotshi ziya ngokuya ngokungafaniyo ebantwini. Iindlela eziphumeleleyo zeCAPTCHA kufuneka zande ngokungaphaya. Umdyarho weengalo uyaqhubeka njengoko ubenzile kule minyaka ingamashumi amabini idlulileyo okanye nangaphezulu.
Ndiza kwenza into engaqhelekanga ngoku kwicandelo lenkxaso: ndiza kukuxelela ngemida. Ndithe 'kuya kufuneka usebenzise umphathi wegama eligqithisiweyo'. Kwaye kuyinyani.
Ndisebenzisa enye, ndincoma oko nakuwe. Ke eli nqaku lixhaswe nguDashlane, umphathi wegama eligqithisiweyo, ukuba undwendwela dashlane.com/tomscott unokufumana uvavanyo lwasimahla lweentsuku ezingama-30 zeDashlane Premium kwaye ndiyakukhuthaza ukuba uzame ngokwakho.
Kodwa kukho ezinye izinto umphathi wegama eligqithisiweyo angenakukunceda ngazo, ukuba ukhathazekile ukuba urhulumente omkhulu uzama ukweba iimfihlo zakho, okanye ukuba umntu uza kufumana izixhobo zekhompyuter yakho, iya kujolisa kwiintlola zeshishini ezinezigidi zeedola kunye nezinto ezifakiweyo ezilanda izinto ngokuthe ngqo kwimemori ebonakalayo, ngaxa lithile kuya kufuneka ususe ubuyile nomphathi wegama eligqithisiweyo ngokwakho, uyibeke kwimemori kwaye uyinike apho ufuna ukungena khona. Ukuba umhlaseli unokufikelela emzimbeni izixhobo zekhompyutha, kugqityiwe. Ewe kunjalo, indawo ebuthathaka phantse kuyo yonke inkqubo yokhuseleko ngabantu.
Zonke iindlela zokhuselo emhlabeni azinakukhusela emntwini okugrogrisa ngogonyamelo ngaphandle kokuba ufake ipassword yakho. Kwaye ukuba amapolisa ase-UK anayo inkundla ekucela ukuba ubonelele nge-password yakho, ukwala ukwenza oko lulwaphulo-mthetho. Abantu baphoswa entolongweni ngenxa yoku.
UDashlane akanakukunceda kuloo nto. Kodwa ukusebenzisa iDashlane kuthetha ukuba igama eligqithisiweyo ngalinye lahlukile liya kukwazisa ngolwaphulo lwedatha ngezaziso ezikhawulezileyo kwiiwebhusayithi onazo kwiiakhawunti. Sebenzisa iDashlane kukwathetha ukuba iphasiwedi nganye inde, inzima, kwaye ikhuselekile- kodwa awunyanzelekanga ukuba uyichwetheze kwifowuni yakho njengoko iDashlane izakuzalisa yona naphi na apho uya khona.
Ingasetyenziselwa nokusebenzisa amagama agqithisiweyo kwiiwebhusayithi ezininzi ngokucofa nje ngokuzenzekelayo. Ngamafutshane, ukusebenzisa iDashlane kuthetha ukuba amagama okugqitha awasakhathazi, ziyinto ekulula kakhulu ukujongana nayo. Ndicinge ixesha elide ngaphambi kokwamkela inkxaso kolu ngcelele, kodwa ngokunyanisekileyo, ukuba ubuchwephesha bokubukela la manqaku kuya kufuneka usebenzise umphathi wegama eligqithisiweyo.
Ke: dashlane.com/tomscott kuvavanyo lwasimahla lweentsuku ezingama-30 lweDashlane Premium, kwaye ukuba uyayithanda, ungasebenzisa ikhowudi 'tomscott' ngesaphulelo se-10% xa uthenga.
UDashlane wafakwa njani kwikhompyuter yam?
I-Dashlane kunye neenkqubo ezinje ngesiqhelo zingena kwisivumelwano ngaphandle kolwazi okanye kusetyenziswa iindlela zorhwebo ezinoburharha ezinokukhohlisa umsebenzisi ukuba ayifake. I-Dashlane ihlala igcwele ngaphakathi kukhuphelo lwesoftware yomntu wesithathu kunye neebhombu. Inokufika kwikhompyuter emva kokuba ezinye iinkqubo zazisiwe kumatshini.
Indlela yokususa iDashlane kwimenyu yokuqala?
1 Vula iWindows Start Menu kwaye uye kwiPaneli yokuLawula. 2 Cofa Khipha inkqubo (okanye Yongeza kwaye ususe inkqubo) kwicandelo leeNkqubo. 3 Khangela iDashlane (nguDashlane SAS okanye omnye umpapashi) kuluhlu lweenkqubo ezifakiweyo kwaye ukhethe kwimouse yakho, emva koko ucofe Khipha. ...
Ngaba ikhona indlela yokuthintela iDashlane ekubeni isungulwe?
Ngamanye amaxesha kwaye ixesha elininzi kwiindawo zokusebenza, i-IT / abalawuli banokuthintela iifayile ezenziweyo ukuba zingazisi kwifolda yeAppData, apho iDashlane ifakwe khona.
Uyikhupha njani iDashlane kwiGoogle Chrome?
Ngenye indlela, ungavula kwakhona i-Chrome, emva koko ukhethe i Window & gt; Izandiso kwimenyu yemenyu phezulu kwesikrini. Emva koko nqakraza kwi-icon yenkunkuma ecaleni kweDashlane kuluhlu ukuze uyikhuphe.